मुसीकोट नगरपालीकामा चारवटा सोलार बत्ती जडान हुने ! – ebaglung.com
मुसीकोट नगरपालीकामा चारवटा सोलार बत्ती जडान हुने !
२०७४ असार ६, मंगलवार ०७:३१	अन्य समाचार
अनिश शर्मा गैरे, गुल्मी, २०७४ असार ६ । मुसीकोट नगरपालीका ४ ओटा सोलार बत्ती जडान गरीने भएको छ । जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीले मुसीकोटमा ४ ओटा सोलार बत्ती जडान गरिदिने जानकारी दिएको हो ।
स्थानीय बिकास अधिकारी कल्पना श्रेष्ठका अनुसार मुसीकोट नगरपालीकाको लागि तत्काल ४ ओटा सोलार बत्ती जडान गरिदिने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
नगपालीकाको कार्यालय अगाडी, बसपार्क, जीपपार्क तथा आँखा उपचार केन्द्रको नजिकै उक्त बत्तीहरु जडान गरीने महिला नेतृ तथा मुसीकोटकी उपमेयर उम्मेद्वार बिष्णु सापकोटाले जानकारी दिइन । मुसीकोट बासीले यस प्रयासलाइ खुशीको श्रोतको रुपमा लिएका छन ।
यसैवीच मुसीकोट नगरपालीका वडा नम्बर ५ का वडा अध्यक्ष पदका उम्मेद्वारहरुले आफ्नो वडालाइ समृद्ध बनाउने बताएका छन । आफ्नो जित भइसकेपश्चात उनीहरुले कफिले चिनिएको वडा आँपचौरको बिकासको लागि निरन्तर लाग्ने र अबको ५ बर्षमा नमुना वडा बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन ।
सामुदायिक रेडियो पुष्पाञ्जलीको निर्वाचन बिशेष कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली काँग्रेसकी उम्मेद्वार मीना जीसीले मुसीकोट –५ लाइ बिकसीत बनाउने बताइन । उनले बिकासका सम्भावनाहरुले खोज्ने तथा मोटरबाटो, खानेपानी लगायतका बिषयहरुमा बिकासका कामहरु अघि बढाउने बताएकी छन । उनले आफुले जितेपछि अनय दलहरुलाइ पनि मिलाएर बिकासमा सहभागी बनाउने बताएकी छन ।
त्यसैगरी नेकपा एमालेका उम्मेद्वार भागीरथ खरेलले पनि शिक्षा स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका कामहरुको लागि निरन्तर लाग्ने बताउदै तीन महिनामा यी कामहरु गर्ने भनी खाका तयार गरी जनताहरुले बताएका चुनावी काममा लागेको समेत बताए ।
त्यसैगरी रेडियो पुष्पाञ्जली सँग बोल्दै नेकपा माओबादीका उम्मेद्वार युवराज खरेलले पनि बिकासका सम्भावनाहरुले खोजी गर्ने बताउदै आफुले बिकासका धेरै कामको लागि करोडौ बजेटहरु समेत आँपचौरमा ल्याउन सफल भएको हुनाले आफुले जित्नुपर्ने बताए ।
तीनै जना उम्मेद्वारहरु आफुले जित्ने कुरामा बिश्वस्त भएको बताएका छन । उनीहरुले सबैलाइ मिलाएर अगाडी बढ्ने बताएका हुन ।
कतार एकता समाजव्दारा राजदूत मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ९ बुँदे ज्ञापनपत्र प्रस्तुत
लागि बेमौसमी तरकारी उत्पादनका लागि प्लाष्टिक टनेल र बीउ वितरण